Oromiyaa Giddu GalaafOromiyaa Lixaa Keessatti Wayyaaneen Uummata Oromoo Waraanaa Jiraachuun Himame. « QEERROO
Oromiyaa Giddu GalaafOromiyaa Lixaa Keessatti Wayyaaneen Uummata Oromoo Waraanaa Jiraachuun Himame.
October 26, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Magaalaa Amboo keessatti humna waraanaa Wayyaanee ilmaan Oromoo qaqqaalii ajjeesaa turuun, uummata magaalaa Amboof uummata Oromoo akka malee aarii jabaa keessa galchaa turuunsaa beekamaadha. Uummata Oromoo nagaa irratti waraana banee ajjeesuun qabsoo Oromoo kan gufachiisuuf akeekkate ta’ullee, gufachiisuu utuu hintaane fuulduratti tarkaanfachiisuu irratti argama. Ummata nagaa irratti waraana banuun gocha shororkeessummaa wayyaaneen bahataa jirtu ifatti mul’ataa tureera. Har’as mul’ataa jira. Saamtotni TPLF shukkaaraaf meeshaalee qaalii Oromiyaa keessaa baasuun ittiin duroomaa turan harkatti, daldala Seeraan alaa Qeerroon Bilisummaaf Oromoon Waliin ta’ee foolisoota Oromiyaaf laate hattoota Wayaanee aarsee kan finiinse Sababaa hatanii milkaa’uu dhabaniif guyyaa kaleessaa irraa qabee Oromiyaa bakkeewwan hatnaan saaxilamanitti uummata Oromoo irratti waraana bananii jiru. Haaluma kanaan halkan edaa Qeerroof uummata Lixa shaggar Gudar irratti, Uummata Lixa Oromiyaa Danbidoolloo Qaaqee fi har’a magaalaa Amboo keessatti uummata Oromoo irratti dhukaasa jabaan dhukaafama turuu isaa gabaasaan arganne ifa godha. Haaluma kanaan magaalaa Qaaqee keessatti namoota 14 rasaasaan rukutuu Wayyaanee ifa ta’uun kaan du’anii kanneen mana yaalaatti yaalamaa jiraachuun himame. Namoota Qaaqee keessatti raasaasaan dhahaman kanneen maqaa isaanii arganne keessaa Dargaggoo Isheetuu Yooseef Tsaggaayee Shifarraa Dassaallenyi Oliiqaati Yoohannis Dirribsaa Misgaanaa fi Amaanee Tasfaayee Matiwos Tasfayee Yoo ta’an magaalaa Gudar keessattis rasaasaan namoonni 4 rukutamuun dubbatame. Gudar keessatti Darggagoo Abbushaa Guddataa Baay’isaa jedhamu rasaasaan rukutamee saatii gabaasni nu gahe kanatti Hospitaala Yuunibarsiitii Ambotti yaalamaa akka jiru gabaasaan Kenya ibsee jira. Akkasuma magaalaa Amboo keessatti meeshaa sinaper jedhamuun uummatni rukutamaa turuu isaa gabaasni keenya ifa baasa. Akka gabaasa arganneetti ” loltoonni Wayyaanee kallattii uummatatti dhukaasaa hinturre, nama kukkufee du’u qofatu karaarratti argamaa ture. Raasasni eessaa dhufteensaa hinbeekamne uummata keenya akka malee hubaa ture. Meeshaan halaalaa ittiin uummanni du’aa ture Qawwee utuu hintaane Sinaper dha. Gamoorra dhaabbatanii nama tuujja’ee deemu keessaa butaa turan” jechuun nuuf himanii jiru. Wayyaaneen meeshaa sinaper jedhamu maqaa humna shororkeessaan gargaarsa biyyoota alaarraa kan argatte yoo ta’u, meshaan sun maqaa Alshababiin kan kennameef yoo ta’u har’a uummata Nagaa kan ittiin ajjeesuuf dhimma bahataa jirtudha. Akka keessa beektonni Wayyaanee himanitti meeshaa sinaper jedhamu lakkoofsaan baay’ee hedduuf leenjifamtoota jajjaboo addunyaan leenjifteef akka ta’e beekamaadha. Har’a meeshaa waraanaa jajjabaaf humna takkaa uummatatti dhukaasaaf hinyaadamneen uummata keenya irratti yakka hamaa raawwatameef Wayyaaneen itti gaafatamaa jabaa ta’uu akkasheen qabdu baramuu qaba. Gocha murna bicuu kanaan Ambo keessaatti namoota lakkoofsaan 10 ol ta’an uummata keessaa rasaasaan kan rukutaman yoo ta’u. Uummanni Agaazii 2 dhagaadhaan akka ajjeese gabaasni arganne ifa godha. Tooruma kanaan maqaa namoota Rasaasa wayyaaneen Ambo keessatti dhahamanii keessaa tokko Rabbumaa Darggaggoo jedhamu lubbuun ajjeesuun himame. Yoo ta’an gocha shororkeessitootaa kanatti uummanni akka gaddeef bakka maraa of qopheessee Wayyaanee irratti duula jabaa banuuf akka jirullee dubbatamuurratti argama. Yakka Wayyaanee kanaan uummanno Oromoo hedduu mufatuun boorsaa isaatii baasee nanoota rasaasni Wayyaanee rukute gargaaruu irratti argama. Kanumaan Ummatii magaalaa Qaaqee midhamtoota qeerroo keenyaa rasaasaa wayyaneen miidhamaniif qarshii tilmaamnisaa 10000 ta’u arjomaniiru haala midhama isaaniin miidhamtoota ittiin yaalchisuuf maallaqni akkakennamuuf walitti abame dhaqqabaa jira jechuunis nuuf himanii jiru Qalbeessaa Dhangi’aan
« Godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessatti basaastonni ayyaana irreessaa gufachiisuuf bobbaafaman saaxilaman .
ONN:Qophii Doyaa Kessummaa Onk 26/2017 »